सङ्गीतका एक भर्च्युओसोको सम्झना- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
गोपाल योञ्जन स्मृति दिवस
अग्रज सङ्गीत–शिल्पी, नेपाली सङ्गीत प्रवीणमध्ये एक गोपाल योञ्जन (२६ अगस्ट १९४३–२० मे १९९७) लाई उनको स्मृति दिवसमा एक कविमार्फत हामीले सम्झिन चाहेका छौं ।
जेष्ठ ७, २०७९ विप्लव प्रतीक
काठमाडौँ — बाल्यकाल छुट्दै थियो आयुको कन्तुरबाट र किशोरवयतर्फ लम्किँदै थिएँ म । तिनताक रात बडो अँध्यारो हुन्थ्यो, अहिले अलि फिक्का भएजस्तो लाग्छ अँध्यारो । त्यस्तो चुक घोप्टिएको रातमा रेडियो नेपालको रात्रिकालीन सेवामा बज्ने आधुनिक गीतहरूको कार्यक्रम सुन्नुको मजा नै बेग्लै हुन्थ्यो ।
अचेल जताततै आवाज छ । म ती दिनको कुरा गर्दै छु, जतिखेर कम थियो कोलाहल । र, म ती दिनको कुरा गर्दै छ,ु जतिखेर रेडियो कमै घरमा हुन्थ्यो । अहिलेजस्तो असङ्ख्य एफएम होइन रेडियो नेपालबाट मात्रै प्रसारण हुन्थे गीतहरू । त्यो पनि बिहान केही घण्टा, दिउँसो केही घण्टा र साँझदेखि रात नपरुन्जेल केही घण्टा । र, जोसँग रेडियो हुन्थ्यो तिनीहरू प्रसारणको अन्तिम घडीसम्म सकेसम्म ठूलो स्वरमा रेडियो बजाइरहन्थे । अहिले त्यस्तो बानी राम्रो मानिँदैन, तर त्यतिखेर त्यसबाट छिमेकीको शान्ति खलबलिन्छ भन्ने न बजाउनेको मनमा हुन्थ्यो, न अर्को छिमेकीलाई शान्ति खलबलिएको आभास हुन्थ्यो ।
र, मेरा लागि भने त्यो घन्काई मानौं वरदान नै थियो । आफ्नो घरको फुच्चे पानासोनिक रेडियोबाट सुनिने पातलो स्वरभन्दा रातको चकमन्नलाई चिर्दै आउने मर्फी रेडियोको आवाजमा ज्यादा गमक हुन्थ्यो र त्यो हृदयको गहिराइसम्म पुग्थ्यो । त्यही कालखण्डमा मैले एक रात एउटा गीत सुनेँ । गीत थियो– ‘सारा दिन अरूलाई बाडेँ, सायद यी रात मेरा ।’ त्यो गीत मेरो बालमनले बुझ्यो/बुझेन के थाहा ? मेरो बालमनमा त्यो गीतको अर्थ कसरी खुल्यो होला ? पक्कै पनि त्यो गीतको गाम्भीर्य त बुझेन होला मनले । कसरी मेरो हृदयस्पर्श गर्‍यो कुन्नि त्यो गीतले ? जो मेरो मन पर्ने नेपाली गीतहरूमध्ये सधैं एक बन्यो । दाइ गोपाल योञ्जनसँग मेरो परिचय यही गीतबाट भयो । हुर्किँदै गएँ, सुन्दै गएँ, नयाँ नयाँ लेयरहरू खुल्दै गयो त्यस गीतको । र, नजिकको साइनो गाँसिदै गयो उहाँका अरू गीतहरूसँग, र जीवनलाई बुझ्न सिकाउँदै गए उहाँका गीतहरूले ।
गोपाल योञ्जनका कृतिलाई विश्लेषण गर्नु फूललाई पराग दिनु हो या फूललाई मानिसले सुगन्ध दिन खोज्नुजस्तै हो । उहाँका गीत मात्र मनोरञ्जन होइनन्, जीवनलाई हेर्ने ढङ्ग, प्रेमलाई महसुस गर्ने मन र जीवनयात्रालाई दिन सकिने सार्थक मोडहरूको खोजी हो । गीतमा काव्यरस भएन भने त्यो मृत शब्दहरूको थुप्रो मात्र हुन्छ । र, उहाँका गीतहरू नै छैनन्, जसमा त्यो रस नहोस् । रस त रस भयो, तर सुस्तरी त्यसमा लेखकको दर्शन नथाहापाउँदो तरिकाले गीतमा मिसाइदिनु अर्को कला हो । उहाँका गीतमा त्यस्ता उदाहरणहरू एक खोज्यो, अनेक भेटिन्छ । उदाहरणका लागि– ‘केही चोटले ज्ञानी हुन्छ, धेरै चोटले बानी हुन्छ ।’ पढ्दा सरल छ, तर यसभित्रका लेयरहरू मान्छेका अनुभवपिच्छे र संवेदनअनुसार विभिन्न हुन पुग्दछ । अर्को एउटा गीतको हरफ छ– ‘मेरो गीत भन्ने अधिकार छैन, गीतको पो म हुँ, मेरो गीत होइन ।’ काव्यप्रेमीलाई यस हरफले सोचको सागरमा डुबाइदिन सक्छ ।
सङ्गीतले गीतलाई आकार दिनुपर्छ, गीतले भन्न खोजेको कुरालाई सङ्गीतले अझ स्पष्ट गराइदिनुपर्छ । उहाँमा यो शील्प यथेष्ट थियो, जुन भाग्यमानी कलाकारको तकदिरमा मात्र हुन्छ । उहाँको तकदिरमा अर्को रमाइलो कुरा पनि छ– त्यो के भने नेपाली आधुनिक गीतको इतिहासमा उहाँ एउटा यस्तो दुर्लभ सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले बनाएका सबै गीतहरू लोकप्रिय भएका छन् । एउटा कवि वा कलाकारको मन निर्मल, ‘फोकस्ड’ र संसारको हितका निम्ति समर्पित हुनुपर्छ । उहाँका गीतहरू सुन्दा यही कुरा स्वस्फूर्त महसुस हुन्छ । कति गम्भीर छन् उहाँका प्रेमगीतहरू, सुन्नेहरूलाई नै थाहा छ कि तिनमा सस्तो भावुकता भेटिँदैन । गम्भीर छन् उहाँका देशप्रेम झल्किने गीतहरू र उहाँका स्पिरिचुअल (भजन होइन) गीतहरू । तिनमा धर्म होइन हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम र इसाई दर्शनहरू सरलीकृत भएका छन् । पलिटिकल्ली करेक्ट भएर लेख्नुपर्ने बेला अहिले होला, ऊहाँको बेला त्यो थिएन, तर पनि उहाँका गीतहरू दोषरहित थिए । उहाँका गीतहरू सुन्दा लाग्छ, उहाँ बडो संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो र आफ्ना हरेक गीतको आफैं समीक्षा गर्नुहुन्थ्यो– श्रोतासमक्ष पुग्नुअघि । उहाँले रोम्यान्टिक, जीवनदर्शनका गीतहरू मात्र लेख्नुभएन, उत्तिकै सबल बालगीत पनि लेख्नुभयो । ती गीतहरू सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरिज पढ्ने त्यसकालका विद्यार्थीहरूले मात्रै सुन्न पाए । कारण, ती गीत रेकर्ड त भए, तर एकाधबाहेक उबेलाको रेडियोसम्म पुगेनन् ।
नेपाली आधुनिक गीतहरूमा दु:खका गीत या भनूँ गम्भीर गीतहरू ज्यादा छन् भनेर गुनासो गर्ने पनि छन् । गोपाल योञ्जनका गीतहरूमा पनि यही कुरा लागू होला । तर, हामीले हेर्‍यौं भने संसारभरि नै रमाइला गीतहरू कम छन् गम्भीर गीतका तुलनामा । भनिएको छ नि– सबभन्दा मधुर गीत तिनै हुन्, जसमा विषादपूर्ण भावहरू हुन्छन् । वास्तवमा यदि कुनै सोचमा चुर्लुम्म डुब्ने कोसिस गर्‍यौं भने गम्भीर गीतमै खुसी फेला पर्छ । उहाँका गीतहरू सुन्दा तिनले र तिनमा भएका जुन दृष्टिकोणले जिन्दगी, प्रेम र सम्बन्धलाई हेर्न सिकाउँछ, त्यसले श्रोतालाई दर्शनको नौलो नेटोपारि पनि पुर्‍याउँछ । उहाँका गीतहरूले जीवन, प्रेम र सम्बन्धलाई बुझ्न सघाउँछ । र, ती गीतहरूले उदासीको सागरमा डुबाउँदैनन्, तिनले त आनन्दको आकाशमा कावा ख्वाउन लैजान्छन् । बुझाइको नवीन साम्राज्यमा पुर्‍याउँछन् र नौला डाइमेन्सनहरू देखाउँछन् तिनले । ती गीतहरू सुनेर अनेकन् श्रोताका चित्त शान्त हुन्छन्, र ज्युने नयाँ तरिकाको किरण सुन्नेहरूको सोचाकाशमा उदाउँछ ।
अनुप्रास मिलाउँदैमा गीत बन्दैन । भाव चाहिन्छ र मुख्य कुरा गीतमा काव्य हुनुपर्छ । संसारभरिका चर्चित गीतहरू सुन्दा यही नै लाग्दछ । गोपाल योञ्जनका गीतहरू पनि काव्यले भरिएका छन् । उहाँ आत्मरतिका लागि गीत बनाउनुहुन्नथ्यो या भनूँ लहडमा काम गर्नुहुन्नथ्यो । उहाँका गीत सुन्दा हरेक गीत उहाँका निम्ति यौटा ‘मिसन’ थियो । र, विविध विषयमा गीतहरू बनाउने उहाँको रुचि थियो । ‘मेरो गीत म उभिएको धूलोले सुनोस’ (रचना : नगेन्द्र थापा), ‘मलाई जिन्दगी यो लाग्दछ’ (रचना : ईश्वर बल्लभ), ‘शिखर भने कहाँ’, ‘लिई गला नदीको’, ‘चौतारीमा बसेर रुन पाऊँ’, ‘मेरो गीत मेरै प्रतिविम्ब होइन’, ‘मेरो पाउमा आज’, ‘दर्पण छाया हेरीहेरी’ र ‘मखमली चोलो’ जस्ता गीतहरूको सूची धेरै लामो छ, उहाँका गीत र सङ्गीतमा विविधता खोज्दै जाँदा । मलाई भने अक्सर उहाँको एउटा गीत याद आउँछ– ‘मन भाँच्ने कुरा, मन राख्ने कुरा ।’ त्यतिबेला नौलो कल्पनाशीलतामा बनेको यस गीतमा धुन, एरेन्जमेन्ट र गायकीको हृदयस्पर्शी सम्मिश्रण भेटिन्छ ।
नारायणगोपाल आफैंमा श्रेष्ठ कलाकार हुनुहुन्थ्यो । आवाज मात्रै उहाँको गुण थिएन, प्रचुर काव्यचेत र सङ्गीतको गम्भीर ज्ञान पनि थियो उहाँसँग । उहाँ आफैं पनि सङ्गीत गर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो । गोपाल योञ्जनसँग भेट हुनुअघि उहाँ आफैंले पनि सङ्गीत नगरेको होइन । तर, दुवैबीच मीतको साइनो लागेपछि जुन आपसी सहकार्य भयो त्यो वास्तवमै नेपाली आधुनिक सङ्गीतका लागि वरदान साबित हुन पुग्यो । उहाँले नारायणगोपाललाई जति गीत दिनुभयो, ती सबै सुनमा सुगन्ध बने । त्यो सङ्गमबाट जति पनि गीतहरूको नेपाली
सङ्गीत भण्डारमा अभिलेख भयो, ती कालान्तरसम्म नेपाली श्रोताहरूको हृदयमा गुन्जिरहनेछ । र, मेरो सम्झनामा रहेका दुईवटा त्यस्ता गीतहरू छन्, जुन गोपाल योञ्जनका तर्फबाट नारायणगोपाललाई अमूल्य मीत कोसेली हुन्– चलचित्र ‘कान्छी’ मा ‘हिमालसरी म अग्लिरहेछु’ र ‘बदलिँदो आकाश’ मा ‘जन्मनुपर्छ हरेक मानिस’ । यी दुई त्यस्ता गीत हुन्, जसमा नारायणगोपालको माधुर्य र रेन्ज दुवै उजागर हुन्छन् । गोपाल योञ्जन आफैंमा कुशल गायक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले लोकप्रिय हुन सक्ने सम्भावना भएका गीतहरू आफैंले गाउने लोभ गर्नुभएन । आफ्ना मीतज्यूलाई मात्र होइन, माणिकरत्न र ध्रुव केसीजस्ता गायकलाई पनि उहाँले हृदयस्पर्शी गीत दिनुभयो । नयाँ कलाकारहरूले बडो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तथ्य थाहै छ । उहाँले त्यस्ता कलाकारहरूको बाटो सधैं सहज गरिदिनुभयो । सुशीला कंसाकार, इन्दिरा मास्के र विमला राई, किरण प्रधान, उदितनारायण झा र प्रकाश श्रेष्ठजस्ता गायकगायिकाहरूलाई उहाँले गाउने अवसर दिनु त्यसैको उदाहरण हो ।
पुरानो कुरा हो । म गीत लेख्न खोज्थेँ, भावहरू भागिदिन्थे, शब्दहरू शून्यमा बिलाउँथे । गोपाल योञ्जनका गीतहरू याद आउँथे । मैले सोचेको गीत त उहाँले पहिल्यै लेखिसक्नुभएको हुन्थ्यो । अनि, म गीत लेख्ने मुड त्यागिदिन्थेँ । केही वर्षपछि मभित्र पनि कुनै कुरालाई हेर्ने नयाँ कोण जन्मियो । उही प्रेम हो, उही मिलन र विछोड हो, उही सफर हो जिन्दगीको, तर महसुस फरक हो भन्ने मलाई लाग्न थाल्यो र म फेरि गीत लेख्न थालेँ । तर, यो कुरा मैले उहाँका गीतहरू सुन्दासुन्दै गुन्गुनाउँदै सिकेको हुँ । एक दिन कवि दाइ दुर्गालालसँग गोपाल योञ्जनका गीतबारे चर्चा चल्यो । मैले आफूलाई कण्ठ भएका सबै गीतहरू दुर्गा दाइलाई सुनाइदिएँ । एकपछि अर्को गीत बडो स्वाद मानीमानी सुन्नुभयो दाइले । कहिले जिब्रो टोक्नुहुन्थ्यो, कहिले ओहो भनेर ओठ गोलोगोलो पार्नुहुन्थ्यो र कहिले घत लागेर मुन्टो हल्लाउनुहुन्थ्यो । जब मैले ‘मेरो गीत मेरै प्रतिविम्ब होइन, जो फुटिजाने हैन, जो टुटिजाने हैन, आकाशजस्तो अमर गीत मेरा, मजस्तो दुई दिनको पाहुना हैन’ भन्ने गीत सुनाएँ दुर्गा दाइले मलाई रोक्नुभयो । त्यो गीतमा जुन भाव थियो, त्यसको नशा सायद उत्रिन दिन मन लागेन उहाँलाई । कोठामा केहीबेर सन्नाटा छायो । एक छिनपछि खाटबाट खुट्टा भुइँमा झारेर बसिरहनुभएका उहाँले निहुरिएको सोचमग्न मुहार उठाउनुभयो, मतिर पुलुक्क हेर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘धात्थें च्वय स:म्ह हला ?’ (साँच्चिकै लेख्न जानेका हगि ?)
किशोरवयदेखि नै मेरो सङ्गत कलाकारहरूसँग भयो । साथी थिए, मञ्जु सिंह उर्फ डायमन्ड सिंह । गाउँथे रेडियोमा । उनैमार्फत ओमविक्रम, सुवर्ण लिम्बू, देव राना, अरुण थापा, मदन परियार आदि भेटिए । सिनेमा क्षेत्रमा लागेपछि दाइ प्रकाश गुरुङ र दीप श्रेष्ठ भेटिए । नारायणगोपालसँग अन्तरङ्ग सम्बन्ध बन्यो, दाइ अम्बर गुरुङसँग गहिरो मित्रता भयो । तर, गोपाल योञ्जनसँग ? अहँ, उहाँसँग मेरो सत्सङ्ग हुन पाएन । कलाको व्यापार हुने चलन नआइसकेको बेला नेपाली सङ्गीतलाई एउटा उपल्लो मोडमा पुर्‍याउँछु भन्ने आकांक्षा भएका मानिससँग मेरो एकपल्ट क्षणिक भेट भयो, त्यो पनि नारायणगोपालको अन्त्येष्टिको दिनमा । संक्षिप्त भेट, तर अर्थपूर्ण र स्मरणीय । कसरी मधुरो स्वरमा बोल्नुभयो, कसरी अम्बर गुरुङ, दीप श्रेष्ठ र मलाई आफ्नो कमलादीस्थित अफिसमा लैजानुभयो र स्वागत गर्नुभयो त्यो मेरो सम्झनामा कुँदिएर रहनेछ । उहाँ पृथक् हुनुहुन्थ्यो र भद्रमानव हुनुहुन्थ्यो– उहाँसँगको पहिलो भेटको प्रभाव मलाई यसरी नै परेको छ । जसले उहाँलाई भेट्न पाएनन्, तिनका लागि उहाँका गीतहरू काफी छन्, उहाँ कुन स्वभाव र चित्तका मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझाउन ।
गोपाल योञ्जनले कहिल्यै पुरानो नहुने र नसिद्धिने अनेकौं उपहार काव्यसहितको गीतहरूमार्फत हामीलाई दिएर जानुभएको छ । वर्षौंदेखि वर्षौंसम्म उहाँका गीत सुनिरहँदा लाग्छ, ती गीतहरूका खुल्न बाँकी नयाँ पक्ष निकै छन् । उहाँका भावहरूको नयाँनयाँ लेयरहरू एकपछि अर्को खोतल्न र त्यसलाई बुझ्न खोज्यो भने सम्भवत: त्यो एउटा आनन्ददायी समय हुनेछ । सङ्गीत गर्ने मान्छे एउटा कुशल शब्दशिल्पी कसरी बन्नुभयो कुन्नि ? यदि उहाँमा त्यो गुण नहुँदो हो त नेपाली श्रोताहरूले त्यस कालखण्डलाई कस्ता गीतमार्फत अनुभूत गर्थे कुन्नि ? र, गोपाल योञ्जन जिउँदै हुँदा कतिले उहाँलाई एवं उहाँका कृतिलाई चिने, अहिले कतिले चिनेका छन् कुन्नि ? तर, नेपाली समाज रहुन्जेल उहाँका कृतिलाई चिन्ने, आस्वाद लिने र उहाँका विचारहरूले सिञ्चित भइरहने मनहरूको कमी हुनेछैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ११:५४
जेष्ठ ७, २०७९ रत्न प्रजापति
लेखक जया ओझाको उपन्यास ‘अनुराग’ मा नारी–पुरुषबीचका प्रीतिको प्रारम्भिक भावदेखि त्यसपछिका आसक्ति, अनुरक्ति, स्नेह, प्रेम, प्रणय भेटिन्छन् । गुनासो र पछुतो पनि भेटिन्छन् ।
मिस्री अर्थात् उपन्यासकी मुख्य नारीपात्रले बेलाबेला मनोगत नै सही, गुनासो गरिरहन्छे । पछुतो मानिरहन्छे । उसलाई थाहा छ, चेतराजले उसलाई दिने साथ भनेको बन्द कोठाभित्रको मात्र हो । त्यो सम्बन्ध त्यही कोठाबाट अन्त्य हुनेछ । तैपनि ऊ चेतराजबाट अलग हुन सक्दिन । उता बाध्यताको बहाना बनाएर चेतराज अर्थात् उपन्यासको मुख्य पुरुष पात्र, जो विवाहित छ, उसले मिस्रीलाई रिझाउन र भोग्न छोड्दैन । मिस्रीको गुनासो र पछुतोबीच पनि चेतराजसँगको अनुराग अर्थात् मायाप्रीतिको सिलसिला चली नै रहन्छ । एकपटक होइन पाँचपटकसम्म एबोर्सन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा पनि न मिस्री चेतराजबाट अलग्गिन सकेकी छे, न त चेतराजले नै मिस्रीलाई भोग्ने इच्छा त्याग्न सकेको छ । कस्तो अनौठो अनुराग हो यो ?
चेतराजले धेरै अन्याय गरेको छ मिस्रीलाई । त्यो अन्यायविरुद्ध आवाज उठ्न सकेको छैन । नारी शक्ति र सामर्थ्य निकै कमजोर देखिएको छ । आकर्षण र समर्पणमा सीमित हुन पुगेकी छ नारी अर्थात् मिस्री । सी ग्रेडका हिन्दी फिल्म अथवा त्यस्तै साहित्यमा पढ्न पाइने सस्तो प्रेमकथाजस्तै लाग्छ ‘अनुराग’ भित्रको कथा पनि । तर, प्रस्तुति भने ए ग्रेडको छ । प्रेमका साह्रै मीठा धुन र गुनगुन छन् । पीडाका आह पनि छन् । यौनका लोभलाग्दा प्रसङ्ग पनि उत्तिकै छन्, जहाँ चेतराज र मिस्री खुलेरै प्रेम गर्छन् ।
कसैको सिफारिसमा जागिर खोज्न हिँडेकी मिस्री र मालिक चेतराजबीचको विवाहेतर सम्बन्धको कथा हो ‘अनुराग’ । चेतराजले मिस्रीलाई प्रेमको नाउँमा धेरै शोषण गर्छ । तर, मिस्री स्वयं त्यही प्रेमको नाउँमा आफू शोषित हुन तयार भइरहन्छे । यतिसम्म कि चेतराजकी स्वास्नीले जन्माएकी छोरीलाई हुर्काइदिने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिदिन्छे । सत्य सबै अवगत छ मिस्रीलाई । सबै थाहा पाएर पनि चेतराजको स्वार्थी प्रेमको बन्धनलाई चटक्क चुँडालेर जान सक्दिन मिस्री ।
कथानकको विस्तार हेर्दा उपन्यासको अन्त्यमा सबथोक बर्बाद हुन्छ र भताभुंग हुन्छजस्तो लाग्छ, तर भएको छैन । सम्हालिएको छ चेतराजको घरसंसार । भला मिस्रीले चाहिँ धेरै दुःख खेपेकी छ । प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्ने किट किन्ने पैसासमेत नभएर उसले भारी तनाव झेलेकी छे । पटकपटक एबोर्सनको नमीठो पीडा भोगेकी छे । रगतमा निथ्रुक्क भिजेर अनिँदो रात काटेकी छे । आमा भएर पनि आमा हुन नपाउनुको असीम व्यथा सहेकी छे । प्रेमको नाउँमा आफ्नै सहमतिले धेरैपटक शारीरिक र मानसिक शोषणमा परेकी छे । उसैको बोलीमा भन्नुपर्दा उसले धेरैथोक गुमाएकी छे, जसको भर्पाई हुनै सक्दैन । सारमा भन्नुपर्दा मिस्रीको जिन्दगीको प्रेम र पीडाको कहानी हो ‘अनुराग’ । पीडाको उरुङ छ ‘अनुराग’ भित्र, जुन मिस्रीले भोगेकी छे, सहेकी छे । अनुराग नै सही, तर दुई नाउमा खुट्टा राखेर पार लाउन सकिन्न भन्ने सन्देश छ ।
सुदूरपश्चिमेली लवजले उपन्यासलाई फरक र मीठो स्वादको बनाएको छ । जब मिस्री रीताले जन्माएकी र आफूले हुर्काएकी छोरी मोक्षलाई लिएर बिदा हुँदै थिई, त्यसबेला घरको मूलढोका आधा खुला थियो । त्यो आधा खुलेको ढोकाले के संकेत गर्छ ? प्रस्ट छैन । मिस्रीकै प्रतीक्षा पो हो कि ?